အီတလီအသင်း (၄)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၈)
30 Jun 2018 . 6:41 AM
၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ဥရောပဘောလုံးအင်အားကြီး ဂျာမနီနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး သမိုင်းတစ်လျှောက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လက်ခံကျင်းပခွင့်ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အချိန်ပို “ရွှေဂိုး”စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး မိနစ် (၃၀)အပြည့်ကစားရတဲ့ “ငွေဂိုး”စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အုပ်စုပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ သြစတြေးလျအသင်းတို့ ပွဲစဉ်မှာ ခရိုအေးရှားနောက်ခံလူ ဆီမြူနစ်ကို အဝါကတ် (၃)ကြိမ်ပြပြီးမှ အနီကတ်ပြထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်ဒိုင်လူကြီး ဂရေဟမ်ပူးလ်ရဲ့ ဟာသဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်။ ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ နယ်သာလန်အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကစားပုံတွေကြောင့် အကျဉ်းတန်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်ကို ကစားသမား (၂)ယောက်စီ ထုတ်ပယ်ခံရကာ ပေါ်တူဂီအသင်းက မန်နစ်ချီရဲ့ တစ်လုံးတည်းသောဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေမှာ ပြင်သစ်အသင်းက လက်ရှိချန်ပီယံ ဘရာဇီးလ်အသင်းကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး အီတလီအသင်းက ယူကရိန်းအသင်းကို (၃-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေသာ မိနစ် (၉၀)အတွင်း အဖြေထွက်ခဲ့ပြီး ဂျာမနီနဲ့ အာဂျင်တီးနားပွဲစဉ်၊ ပေါ်တူဂီနဲ့ အင်္ဂလန်ပွဲစဉ်တွေက ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်အထိ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းတို့ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကို အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဆီးမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်ခဲ့တယ်။
ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ အိမ်ရှင်ဂျာမနီနဲ့ အီတလီ၊ ပြင်သစ်နဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အီတလီအသင်းက အိမ်ရှင်ဂျာမနီအသင်းကို အချိန်ပိုသွင်းဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းက ပေါ်တူဂီအသင်းကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို အီတလီအသင်းနဲ့ ပြင်သစ်အသင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်ဆောင် ဇီဒန်းရဲ့ ဒရမ်မာဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အီတလီအသင်းကို ပယ်နယ်တီကတစ်ဆင့် ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းယူပေးကာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အီတလီနောက်ခံလူ မာတာရာဇီကို ခေါင်းနဲ့ တိုက်ခဲ့လို့ တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး ဗီလိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မာတာရာဇီရဲ့ ချေပဂိုးကြောင့် အချိန်ပိုဆက်လက် ကစားခဲ့ရပြီး တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ဂိုးထပ်မံမသွင်းယူနိုင်လို့ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူခဲ့ရတယ်။ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူရာမှာ အီတလီအသင်းက (၅)ဂိုးလုံး ဝင်အောင်ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်အသင်းကတော့ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး ထရာဇီဂေး လွဲချော်ခဲ့လို့ (၅-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ အီတလီအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို (၄)ကြိမ်မြောက် ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလ်အသင်းအပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၉)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Dates –9June –9July
Champions – Italy (4th title)
Fourth Place – Portugal
Goals Scored – 147 (2.3 per match)
Attendance – 3,359,439 (52,491 per match)
Top Scorer(s) – Miroslav Klose (Germany) – (5) goals
Best Player – Zinedine Zidane (France)
Best Young Player – Lukas Podolski (Germany)
Best Goalkeeper – Gianluigi Buffon (Italy)
Fair Play Award – Brazil, Spain
Photo:YouTube, Z103.5, These Football Times, Heywise
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၈)
၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ဥရောပဘောလုံးအငျအားကွီး ဂြာမနီနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ရရှိခဲ့ပွီး သမိုငျးတဈလြှောကျ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ လကျခံကငျြးပခှငျ့ကို ရရှိခဲ့တာဖွဈတယျ။ အခြိနျပို “ရှဂေိုး”စနဈကို ဖကျြသိမျးခဲ့ပွီး မိနဈ (၃၀)အပွညျ့ကစားရတဲ့ “ငှဂေိုး”စနဈကို ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ အုပျစုပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈတဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးနဲ့ သွစတွေးလအြသငျးတို့ ပှဲစဉျမှာ ခရိုအေးရှားနောကျခံလူ ဆီမွူနဈကို အဝါကတျ (၃)ကွိမျပွပွီးမှ အနီကတျပွထုတျပယျခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျဒိုငျလူကွီး ဂရဟေမျပူးလျရဲ့ ဟာသဆနျဆနျဖွဈရပျ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျးဖွဈတယျ။ ရှုံးထှကျပှဲစဉျအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့ နယျသာလနျအသငျးတို့ရဲ့ ပှဲစဉျဟာ ကွမျးတမျးတဲ့ ကစားပုံတှကွေောငျ့ အကဉျြးတနျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈခဲ့ပွီး တဈဖကျကို ကစားသမား (၂)ယောကျစီ ထုတျပယျခံရကာ ပျေါတူဂီအသငျးက မနျနဈခြီရဲ့ တဈလုံးတညျးသောဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ကှာတားဖိုငျနယျပှဲစဉျတှမှော ပွငျသဈအသငျးက လကျရှိခနျြပီယံ ဘရာဇီးလျအသငျးကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွီး အီတလီအသငျးက ယူကရိနျးအသငျးကို (၃-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတှသော မိနဈ (၉၀)အတှငျး အဖွထှေကျခဲ့ပွီး ဂြာမနီနဲ့ အာဂငျြတီးနားပှဲစဉျ၊ ပျေါတူဂီနဲ့ အင်ျဂလနျပှဲစဉျတှကေ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျအထိ ရောကျရှိခဲ့တယျ။ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျမှာ ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးတို့ ပွိုငျဘကျအသငျးတှကေို အနိုငျရခဲ့ပွီး ဆီးမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျရောကျခဲ့တယျ။
ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ အိမျရှငျဂြာမနီနဲ့ အီတလီ၊ ပွငျသဈနဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးတို့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အီတလီအသငျးက အိမျရှငျဂြာမနီအသငျးကို အခြိနျပိုသှငျးဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးက ပျေါတူဂီအသငျးကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တယျ။ နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲကို အီတလီအသငျးနဲ့ ပွငျသဈအသငျးတို့ တကျရောကျခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျဆောငျ ဇီဒနျးရဲ့ ဒရမျမာဆနျဆနျဖွဈရပျကွောငျ့ နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ ဗိုလျလုပှဲတဈပှဲဖွဈခဲ့တယျ။ အီတလီအသငျးကို ပယျနယျတီကတဈဆငျ့ ဦးဆောငျဂိုး သှငျးယူပေးကာ သူရဲကောငျးတဈဦးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အီတလီနောကျခံလူ မာတာရာဇီကို ခေါငျးနဲ့ တိုကျခဲ့လို့ တိုကျရိုကျအနီကတျပွ ထုတျပယျခံခဲ့ရပွီး ဗီလိနျဖွဈခဲ့တယျ။ မာတာရာဇီရဲ့ ခပြေဂိုးကွောငျ့ အခြိနျပိုဆကျလကျ ကစားခဲ့ရပွီး တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျဂိုးထပျမံမသှငျးယူနိုငျလို့ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူခဲ့ရတယျ။ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူရာမှာ အီတလီအသငျးက (၅)ဂိုးလုံး ဝငျအောငျကနျသှငျးနိုငျခဲ့ပွီး ပွငျသဈအသငျးကတော့ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး ထရာဇီဂေး လှဲခြျောခဲ့လို့ (၅-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ အီတလီအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို (၄)ကွိမျမွောကျ ရယူနိုငျခဲ့ပွီး ဘရာဇီးလျအသငျးအပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးအသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၉)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ